डा. रावलको मोबाइलमा ओलीको घण्टी, दिए बलियो जिम्मेवारी « Ok Janata Newsportal
डा. रावलको मोबाइलमा ओलीको घण्टी, दिए बलियो जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष डा. भीम रावललाई संयमित भएर कार्य र्गा सुझाएका छन् । एमालेका एक नेताका अनुसार रावलको उचाई थप मजबुद बन्दै गएको भन्दै ओलीले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न भनेका छन् ।
एमालेलाई मजबुद बनाउनको लागि रावलको भूमिकाको स्मरण गर्दै ओलीले पार्टी मिलाउन केही त्याग गर्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ पार्टीबाट अप्ठ्यारो बेलामा साथ दिएकाहरुलाई जिम्मेवारी दिँदा पार्टी थप मजबुद बन्ने ओलीको बुझाइ छ ।
एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने ओलीको आग्रहको प्रतिउत्तर फर्काएका छैनन् । रावलले आफूलाई अपमानित भएको महसुश गरेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । रावलले आइतबार मात्रै आफू निकट केही नेताहरुलाई भेटेर यस बारेमा सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए ।
उता, सुदूरपश्चिमको ईञ्चार्ज पाएका लेखराज भट्ट खुसी हुँदै जिल्ला दौडाहमा लागेका छन् । उनको प्रगतीको भने एमालेले समिक्षा गर्ने जनाएको छ । ओलीले रावललाई समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको गतिविधि नियाल्न भनेका छन् ।